Handeha hamonjy fianarana tao Soalazaina izy no nisavika ilay kamiao avy any Vohitsoa handeha haka fasika any Soalazaina, amin’ny lalana mampitohy an’Anjozorobe sy Ambodirano any Ambatondrazaka.
Tapaka hisatra tampoka ilay kamiao teo amin’ny fidinana, sahabo 500 m tsy ho tody eo amin’ny toerana saika hakany fasika, izay tetezana no mamarana azy. Nifatratra teo amin’ilay tetezana ilay kamiao, avy eo ary nianjera tao anaty rano. Olona fito no naratra tamin’izany, noraofina tao ambany tetezana.
Ny iray tamin’ireo naratra dia zokin’ilay maty ihany. Tsy vitan’ny CSB II ao Soalazaina ny fandraisana an-tanana ireo naratra, ka naterina any amin’ny hopitaly Chrr, any Ambatondrazaka. Noho ny halavirana sy ny haratsin’ny lalana dia efa tamin’ny 4 ora sy sasany izy ireo vao tonga tao amin’ny hopitaly.
Nisahotaka ny dokotera sy ny mpandraharaha ao amin’ny hopitaly Filamatra ao amin’ny faritra ao Ambatondrazaka, nandray azy ireo. Ialanana nenina ao amin’ny toeram-pandidiana ao Ambatondrazaka ilay naratra mafy, izay vaky loha sy tapaka ny tanany.
Nisy tamin’izy ireo koa nivadika ny soroka. Ny sasany tatatataka, toy ny voadidin’ny antsy ny tarehiny.